Meaning of zvakanaka nzvimbo uye neizvi nzvimbo vachishandisa "munamati", iro shamwari manzwiro?
トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Meaning of zvakanaka nzvimbo uye neizvi nzvimbo vachishandisa "munamati", iro shamwari manzwiro?
munamati ari zvinoreva
nyanzvi kufembera zviri "munamati" neizvi nzvimbo nazvo kuzvitaurira 3500 Yen Free kadhi rine mutana rambi kuruoko rwerudyi rwechikepe Nhamba kwakadaro kwakanga yakanga yakafanana munamati, uye unouya nomudonzvo noruoko rworuboshwe , zvinoreva kuti aimbova nemudzungairi. Sezvo ndokukweverwazve kuratidza kurutivi rworuboshwe-ruoko, kwete chete rinomiririra zvedzidzo dzakadaro se pakudzokorora uye kudzidza, kubva zvakaitika achidzungaira nyika pamwe kutsvakatsvaka, uye akapa nhungamiro mudiki sezvo vamutangira rave zvichishandurwa.
In yaro Kuti munamati kuti kadhi wanga kureva kudiwa kuzodzosera chinangwa nokudhiraivha pa pachangu. Rambi unofanira ruoko anomiririra zvepfungwa wechiedza, sezvo inoratidzwa kugamuchira Chii chakaitika zvakanaka kana zano kamwe kuti kugadzirisa dambudziko, munamati waJehovha kadhi iri kutonga thumbs, zano chakakwirira, kufunga, mweya, rinomiririra uye akangwarira. Kana iwe
munamati mumwe manzwiro bato
munamati kadhi munhu akanaka nzvimbo Vanzveri kureva kuti akazviratidza zvakanaka nzvimbo chiratidzo chokuti inofadza zvakare nokudhiraivha kuzviseka. Mupikisi anoda kuzodzosera nokudhiraivha ukama newe chaizvo. Vanhu vendangariro vose uchiedza ukama kusvikira ikozvino kudzamisa zvakawanda riri pakati vanhu vaviri, chaizvoizvo ndapota edza kuziva kana ishamwari wechokwadi mumwe.
By kudzokera pachavo kuti zvakadzikama zvino mumwe kuita kudaro, nokuti unogona kuzodzosera vanoziva remangwana mirayiridzo mumwe, panewo mukana kutanga kupinda muwanano. Kana vanhu rusina kukwana mberi rudo naye ari ezvinhu asingagoni kubvisa noukama nemi.
mupikisi ari kuedza Mikiwameyo kana chero munhu ari iwe, dzakakodzera somunhu naye. Sezvo nguva yakadaro ndiyo vanetsane kunyange kana pasinei inofadza, uye simbisa Polish pachako zvishoma kubva rudo, ngatitaurei kuramba achiteerera uye vepachokwadi pachako. Of
munamati Kana mumwe bato manzwiro
munamati kadhi iri neizvi nzvimbo Vanzveri kuti kwaireva akabuda ari neizvi nzvimbo pachinhu anokumhan'arira wako, tariro uye hatidi Fukairi. Panguva iyoyo, ndiyo yepakutanga, iyo waitsimbirira mumwe bato chete nemanzwiro ako dai makatsemuka ari ukama. Chekutanga ngavave munhu mumwe kune mumwe bato, saka henyu mukana kufunga. Vanhu rusina kukwana mberi rudo iri ezvinhu mamwe bato haadi nokushingaira rudo. Apo
ndakuudzai manzwiro avo pamusoro anokumhan'arira yakadaro, uchava kuvenga chinhu kwenyu. Kuti uve anokwezva chipo nokuda anokumhan'arira, Toka kubuda kufamba, akadai kuedza zvidzidzo, ndapota edza itangezve manzwiro ako kutora nguva kuti introspective.